Izindaba - Umgqugquzeli Wesikhwama Soqalo Ziplock- Abathengisi Bezitolo Ezidayisa Izinto Ezithengiswayo Ku-inthanethi
Umhleli Wesikhwama Se-Bamboo Ziplock- Abathengisi Bezitolo Ezidayisa Izitolo Ezithengiswayo Ku-inthanethi
Idrowa lasefektri lasekhishini eligcwele izikhwama zoziphu nezikhwama, lizulazula esiphithiphithini, libhajwa nebhokisi lekhadibhodi eligajwe endaweni yalo engaphezulu njalo uma uzama ukulivula -bamboo-ya!Thatha lokhuHack isitoreji!Umhleli wesikhwama se-ziplock kanye ne-dispenser yibhokisi loqalo lemvelo elingu-15″Lx11.8″Wx3 ″H elinezikhala ezikhethiwe zokudla okulula, isemishi, iquart, nezikhwama zokudla zepulasitiki ezingamagalani.
Ibhokisi le-bamboo lifika ngaphandle komhlangano odingekayo.Ukusikwa kwayo okuphezulu kulingisa izimo zalezo oziklebhula eduze kwemigqa enezimbobo yekhadibhodi ye-ziplock ngayinye, ngakho-ke ukudlulisa yonke ingxenye yezikhwama zepulasitiki zisuka ezitsheni zazo ezichotshozekayo, ezijwayele ukungena ku-entropy kuya koqalo oluqinile, olucocekile kulula.Kulula kakhulu kunokuqondanisa nokuvala oziphu kulezo zikhwama ezinkulu ze-ziplock, lokho kuyiqiniso.
Ifektri ye-OEM ZIPLOCK BAG ORGANIZER - Umhleli wethu we-baggie angagcina izikhwama zepulasitiki ezingcolile zokugcina ukudla ekhabetheni lakho ngezigaba, gcina ikhishi lakho licocekile.
IYAQHUBEKA NEZIKhwama eziningi ze-ZIPLOCK - Umhleli unamandla amangalisayo futhi angagcina ngokuphelele izinhlobo eziningi zezikhwama zamasemishi, izikhwama ze-quart, izikhwama ze-snack, izikhwama zamagaloni.
DIMENSIONS - 15″Lx11.8″Wx3 ″H, sicela ulinganise usayizi wedrowa lakho kusenesikhathi, yebo, ungalibeka phezu kwekhawunta yasekhishini noma eshalofini lesitoreji.
IMATERIAL - Yenziwe ngoqalo lwemvelo oluvuselelekayo, ingaphezulu livalwe ngopende, lipholishwe kahle ngesandla, liqinile futhi lihlala isikhathi eside.
KULULA UKUSEBENZISA - Umkhiqizo awudingi ukuqoqwa.Vele ufake isikhwama se-ziplock ebhokisini ngokuya ngokuboniswa kwelebula.
500 ama-pcs--$50 isaphulelo
1000 ama-pcs-$100 isaphulelo
Isevisi yokuxhumana yesaphulelo eyengeziwe.
*Qinisekisa ukufaneleka kwemikhiqizo yethu.Cela isampuli yamahhala.
*Nikeza nge-DHL/Fedex/UPS futhi ibe nokufaneleka kwesampula yamahhala
Isikhathi sokuthumela: Nov-30-2021